Global Voices teny Malagasy » Afghanistana: Kabul Bank Eo Am-pahafatesana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:46 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
(Marihana fa efa tamin'ny volana Septambra 2010 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Tsy rendrarendra manokana ho an'ny firenena manankarena ny krizy ara-bola. Ny tantaran'ny Kabul Bank  any Afganistana dia fahaverezam-bola ho an'ny mahantra. Eo am-pahafatesana, manana trosa 1 miliara  ny banky, izay an'ny rahalahin'i Hamid Karzai, filohan'i Afghan. Olona an'arivony no afaka naka vola maherin'ny 200 tapitrisa dolara tamin'ny herinandro lasa, fa ny hafa kosa tsy navelan'ireo mpiambina mitam-piadiana niditra tao amin'ny banky.
Mandoa vola ho an'i Karzai
Juan Cole, Amerikana mpahay tantara sady mpampianatra ambony izay mibilaogy momba an'i Afghanistana sy Afovoany-Atsinanana nanoratra hoe:
Nanomboka tamin'i Sherkhan Farnood, mpandraharaha ara-bola nanangana ny Da Kabul Bank taorian'ny firodanan'i Taliban ny tantara. Toa nampiasa ny orinasa hanampiana ireo mpanao politika sy ny fianakavian-dry zareo nandritra ny taona maro izy. Nanome vola an-tapitrisany tamin'ny fampielezan-kevitry ny filoham-pirenena Hamid Karzai tamin'ny fahavaratra teo i Farnood, fampielezan-kevitra izay niampangàna an'i Karzai ho nahazo fandresena tamin'ny alalan'ny hosoka goavana. (Fanamarihana: tsy mandany vola be ny mividy vato any Afganistana, ary hahazoana vato marobe ny ‘vola an-tapitrisany’). Ny mpanatanteraka ambony iray ao amin'ny banky, Khalilu'llah Frozi, no mpanolotsaina tamin'ny fampielezan-kevitr'i Karzai. Manana petra-bola 9% ao amin'ny banky i Mahmoud, rahalahin'i Hamid Karzai,… Mpanao kolikoly ny governemantan'i Karzai ary maloto hatrany am-potony. Tsy tokony ho faty amin'ny fanohanana azy na dia miaramila Amerikana iray aza.
Nanoratra  i Paiman Majedi, bilaogera Afgana ao Afghanistan fa samy mpiara miombon'antoka goavana ao amin'ny banky ny rahalahin'ny Filoha Karzai, Mahmoud Karzai sy ny filoha lefitra Afghan, Hussein Fahim.
Nankany amin'ny banky aho. Feno olona te-haka ny volan'izy ireo tao. Nangatahana aho mba hiverina rahampitso rehefa avy niandry ora marobe … Raha tsy mirotsaka an-tsehatra haingana ny governemanta sy ny banky foibe Afghanistana, ho faty ny Kabul Bank…Miteraka ahiahy momba ny zavatra ataon'ny banky tsy miankina ao Afganistana ity krizy ity.
Afghanistan Economy, bilaogy mamangom-baovao ara-toekarena ao Afghanistana nanoratra hoe:
Mety hanimba ny ady amin'i Taliban ny firodanan'ny Kabul Bank. Mety hanimba ny sehatra tsy miankina sy ny fampiasam-bola ao Afganistana ihany koa raha bankirompitra ity banky ity. Voakasiky ny tolona ho fanavotana ity banky ity koa ny sehatra tsy miankina sy ny fiadidian'ny filoha
Mahmoud Hakimi, bilaogera sady mpanao gazety Afghana nanoratra  tao amin'ny bilaoginy, Tabarghanak [fa]:
. Manontany ny olona, raha manome antoka ny banky ny governemanta Afgana, iza no hiantoka ny vahoaka? An-jatony no nankany amin'ny Kabul Bank mba haka ny volany … Nametraka ny volany tao amin'ity banky ity tamim-pitokisana ireo vahoaka mahantra, raha nandre izy ireo fa nividy trano tsara tarehy tany Dubai tamin'ny volan'izy ireo ireo mpitantana ny banky, nanjary natahotra izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/18/108651/
 manana trosa 1 miliara: http://www.smh.com.au/business/dont-bet-on-kabul-bank-20100909-153a8.html
 nanoratra : http://www.juancole.com/2010/09/collapse-of-kabul-bank-points-to-terminal-corruption-of-karzai-government.html
 nanoratra : http://afghanistaneconomy.blogfa.com/post-24.aspx